Global Voices teny Malagasy » Tsy Eken’ny Firenena Mikambana Ny Pasipaoro Avy Ao Taiwan, Laviny Tsy Hiditra Ny Birao Ao Zeneva · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Septambra 2015 5:38 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Misafidy ny handrakotra amin'ny taratasy mandraikitena ny hoe “Repoblikan'i Shina” eo amin'ny pasipaorony ny sasany amin'ireo avy ao Taiwan. Sary avy amin'ireo teratany avy any Taiwan monina ao Eoropa.
Tsy mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana i Taiwan noho ny fandavan'i Shina sy filazàny an'i Taiwan ho azy. Matetika no miafara amin'ny henatra sy fahafaham-baraka ho an'ireo teratany avy ao Taiwan io sata diplaomatika tsy azo antoka io rehefa mamonjy hetsika iraisam-pirenena sy fotoana hafa. Ny tranga haingana indrindra izao dia ny teratany Taiwanais voasakana tsy nahazo niditra ny biraon'ny Firenena Mikambana tao Zeneva (UNOG).
Ny 15 Septambra 2015, rehefa nisidina nankany Soisa i Yu-Ling Tsai, teratany Taiwanais, handeha hitsidika ny biraon'ny Firenena Mikambana ao Zeneva (UNOG), dia nilazàn'ny teo amin'ny mpandray vahiny fa antontan-taratasy tsy manankery ny pasipaorony ary dia ny karapanondrony no notakiana hasehony. Taorian'ny fampisehoany ny karapanondrony avy any Taiwan dia mbola nolavina indray i Yu-Ling Tsai. Nolazain'ny  mpiasan'ny Firenena Mikambana fa tsy ekena ny pasipaoro sy karapanondro navoakan'ny governemanta ao Taiwan. Fanampin'izany, nolazain'ilay  mpiasan'ny Firenena Mikammbana fa tany ao anatin'i Shina i Taiwan, ka noho izany dia afaka hiditra ny UNOG izy raha mampiseho pasipaoro navoakan'ny Repoblikan'i Shina.. Hoy i  Tsai tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook :
Avy any Taiwan aho ary pasipaoro navoakan'ny Taiwan no hany ananako. Tsy ampahany amin'i Shina i Taiwan, ary tsy teratany Shinoa velively aho. Tsy hety hisy mihitsy ho ahy izany hanana pasipaoro na karapanondro navoakan'ny Repoblikan'i Shina izany. Maninona ianareo [Firenena Mikambana] no mila voatsiary mitady ny tsy misy.[…] Fanavakavahan'ny Firenena Mikambana ahy izao.
Rehefa nanao fangatahana fanazavana ofisialy avy amin'ny Firenena Mikambana ireo Taiwanais mpanangona vaovao, momba ny fepetra misy ao aminy, nolazain'i  Rhéal LeBlanc, mpitondra tenin'ny UNOG fa na dia mandray ireo olona rehetra avy amin'ny lafivalon'ny tany tonga hitsidika azy aza ny Firenena Mikambana, tsy manaiky kosa ireo pasipaoro avoakan'ny Taiwan (ROC). Raha mikasa hitsidika ny biraon'ny Firenena Mikambana ny teratany avy ao Taiwan, hoy i LeBlanc nanampy, dia ilain'izy ireo ny mampiseho fahazoandàlana mamily fiara ara-dalàna na karapanondro hafa. Kanefa, raha ny olan'i Tsai, tsy nekena ny karapanondrom-pireneny.
Na nanambara  tamin'ny BBC aza ny UNOG fa fisehoan-javatra iray monja ny an'i Tsai, efa nisy ohatra hafa momba ireo tranga hafa tahaka izany. Ny 10 Janoary 2015, nolavin'ny  mpandray vahiny tao amin'ny UNOG i Min-Shiuan Wangon, olompirenena avy any Taiwan, satria pasipaoro Taiwanais no hany antontan-taratasy teny aminy. Tany am-piandohan'ny 2012, zavatra tsy nisy hafa tamin'izany no nanjo ny teratany Taiwanais iray hafa .
Efa nandà ihany koa tsy handray ireo manampahefana avy any Taiwan tonga hitsidika ny foiben-toerany sy hanatrika ireo fivoriana diplaomatika nokarakarainy ny Firenena Mikambana, raha vao pasipaoro avy amin'ny fireneny ihany no asehon'ireo solontena avy any Taiwan. Raha nikasa ny hanatrika ilay fivoriana alefa amin'ny zanabolana nokarakarain'ny Kaomisionan'ny Firenena Mikambana momba ny Satan'ny Vehivavy, natao tao New York tamin'ity taona ity i Jing-Yi Lin, dia tsy nomena alàlana  hiditra tao am-pivoriana satria pasipaoroTaiwanais no teny aminy.
Tany amboalohany, ny 22 May 2012, rehefa nikasa ny hiditra ny lalantsara natao ho an'ny daholobe tao amin'ny Fivoriambe Erantany ho an'ny Fahasalamana ny Andiany Mpampiroborobo ny Fikambanana Erantany momba ny Fahasalamana (OMS) avy any Taiwan ka nampiseho ny pasipaorony fa tsy ny karapanondrom-pireneny, dia noroahana satria ny mpiasan'ny OMS nilaza tamin'izy ireo hoe  tsy manaiky ny pasipaoro avy any Taiwan ry zareo.
Ninoan'i  Hsing-Che Tu, talen'ilay Andiany Mpampiroborobo ny Fikambanana Erantany momba ny Fahasalamana (OMS) sady efa lefitry ny minisitry ny fahasalamana tao Taiwan, fa fihetsika fanalàna baraka ilay fanilihana ny pasipaoro Taiwanais:
Mifototra amin'ny tanjon'ny Fikambanana Erantany momba ny Fahasalamana (OMS), dia mandray ny olona avy amin'izao tontolo izao hiditra ny lalantsarany ao amin'ny Fivoriambe Erantany ho an'ny Fahasalamana izy. Raha ny voalaza, rehefa manana antontan-taratasy misy ny sarinao ianao hanamarinana ny maha-ianao anao, dia afaka miditra. Tokony ho ampiharina amin'ny firenena rehetra io fitsipika io, mba ho afaka miditra ny rehetra rehefa mampiseho antontan-taratasy manamarina ny maha-izy azy.[…] Kanefa, satria ny fitantanan'i Ma misisika amin'ny politika ‘Shina tokana’, toa mbola fanamby ho an'ireo mpikambana ao aminy ny pasipaoro avy amin'ny Repoblikan'i Shina (ROC), ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina (PROC). Raha io lojika io no arahana, tsy ho ekena ny ‘fiverenan'ny ROC’ ho ao amin'ny OMS.
Ilay lazaina fa ‘fanamarinana in-droa ny maha-ianao anao’ [pasipaoro iray miampy antontan-taratasy iray hafa] dia toa fitaka ihany hanalàna baraka ireo izay nitondra pasipaoro avy amin'ny (ROC) Taiwan. Ny tale jeneraly amin'izao fotoana izao, Margaret Chan Fung Fu-chun avy any Shina, miezaka milaza amin'izao tontolo izao fa tsy misy izany ROC izany, ary ny PROC no hany tokana misolo tena an'i Shina manerana izao tontolo izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/21/74794/
 nanjo ny teratany Taiwanais iray hafa: http://www.backpackers.com.tw/forum/showthread.php?t=723104
 tsy nomena alàlana: http://www2.tku.edu.tw/~tfstnet/index.php?node=latest&content_id=4187
 nilaza tamin'izy ireo hoe: http://www.taiwan-un-alliance.org.tw/document/20120724.html